आजको विचार Archives - Page5of5- Suvham News
Jun192017 by gsmktmNo Comments
डा. निर्मलमणि अधिकारी----- प्राचीन विचार एवम् परिकल्पना र आधुनिक वैज्ञानिक खोजहरु बीचमा रहेको अर्थपूर्ण सह-सम्बन्ध पत्तो पाउनुपनि आजको वैज्ञानिक कर्मको एक प्रमुख प्राथमिकतामै पर्नु पर्दछ । विज्ञान अविरल प्रवाहमान् धारा हो । यो क्रमबद्ध ज्ञान-संचयको श्रृंखला हो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने औपचारिक प्रयोगशाला ल्याबोरेटरी मा बसेरमात्र वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिने होइन; यो त हामी प्रत्येकको दैनिकी पनि हो । व्यावहारिक अनुभव पहिले हुन्छ र त्यसलाई व्याख्या गर्नेवाला वैज्ञानिक सिद्धान्त त्यसपछि बनिन्छन् । प्रायः प्रविधि पहिले आउँछ र विज्ञान तत्पश्चात् । हामीलाई पांग्रा बनाउन पहिल्यै आउँथ्यो र त्यसपछिमात्र गति विज्ञानको विकास भएको हो । वाष्प-ईन्जिजन पहिले बनेका थिए र थर्मोडाइनामिक्स त्यसपछिमात्र । शताब्दीयौं वा सहस्राब्दीयौं देखिनै मान्छेले प्राकृतिक जीवनको प्रयोगशालामा अनेकौं परीक्षण (Test),
Jun182017 by gsmktmNo Comments
Numa Nath Pyakurel _____ यो वा त्यो अथवा त्यो या यो तर दुबै हैन भन्ने पश्चिमि प्रतिमान पुर्णतया घृणामा आधारित छ। जसको परिणाम हिजो आज निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रमामा बिपक्षी दलको प्रतिसपर्धी उम्मेद्बारको मान मर्दन गर्दै, खुइल्याउदै आफ्नो दलको उम्मेद्बार मात्रै ठिक भन्दै तिन फुट उफ्रने र आफ्ना दलका उम्मेद्बारका शृङ्खलाबद्ध कमजोरीलाई लाजपचाएर ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत छ। ....गाउँमा मुखिया बाजेको घरमा एमालेको ठुलो झण्डा राखिएको छ। मुखियाको चाल देखेर पिपलबोटे काकाले पनि घरमा नेपाली कांग्रेसको त्यत्रै झण्डा राखेका छन। सधैं साह्रोगाह्रो पर्दा आमुने सामुन्ने हुने दुइजना हिजोआज पानी बाराबार छ। बस्नेत दाजु नेत्रबिक्रम चन्द समुहको तर भाउजु माओबादी केन्द्रकी निर्वाचन घोषणा भएपस्चात बाट बोलचाल बन्दछ। साँझबिहान कुकुर र बिरालो जस्तो लडिरहन्छन्न। पुछार घरेकाले सुरुमा नेपाली कांग्रेसको झण्डा राखेक
कठै नेपालि मिडिया को हालत ?
Nirmala Mani Adhikary विदेशमा एउटा भवनमा आगलागी भएको घटनाको कभरेजको तुलनामा देशभित्र भएका दुर्घटना र जनधनको क्षतिको समाचार कभरेज अति कम हुनुले हाम्रा समाचार मिडियाको दुरवस्था छर्लंग देखिन्छ ।